Author Topic: New Nepali Movies * News * (Read 35101 times)
report.jpg (164.98 kB, 677x746 - viewed 390 times.)
बलिउड गीत संग कपि गरिएको शुभेच्छाको ‘मखमली’ गीत(भिडियो सहित)
२०७१ चैत्र १८ बुधबार,काठमाण्डौ । चर्चामा आउन जस्तो सुकै गर्न पछी नपर्ने निर्मात्री तथा कलाकार शुभेच्छा थापा र उनका हितैसी निर्देशक राजु गिरी कपि गरेरै फिल्मको प्रचार गर्न मस्त हुन्छन् । तैपनि यी दुइ कपि गर्दा खुसि देखिन्छन् ।
कहिले अंगप्रदर्शन गर्ने त कहिले विदेशी चलचित्रको कपी गर्ने बानि परेकी शुभेच्छा फिल्म ‘मिस नेपाल’ को समयमा । यस्तै, उनले बक्षस्थललाई माछाले छोपेको तस्बिरले चर्चा सँगै आलोचना सहेकी थिइन् ।
यद्दपी उनि कपि गर्ने लत बाट छुट्न सकेकी छैनन् यसै क्रममा उनको निर्माण तथा अश्लिल निर्देशक भनेर चिनिएका राजु गिरी निर्देशित फिल्म ‘मखमली’को सार्बजनिक गीतको भिडियोका दृश्यमा नक्कल गरिएको छ । गीतमा बलिउड नायक सलमान खान अभिनित चलचित्र ‘किक’को ‘झुम्मे कि रात हे’बोलको गीतको भिडियो जस्तो छ । सलमान खानको गीतको भिडियोबाट साभार गरिएको कुरालाई निर्देशक राजु गिरीले पनि स्विकार गरेका छन् ।
असोजमा `वडा नम्बर ६`
छायांकनको समयमा नयाँ बर्षमै प्रदर्शनमा ल्याउने तयारी गरिएको फिल्म 'वडा नम्बर ६'लाई असोजमा रिलिज गर्ने तयारी गारिएको छ । यो फिल्म असोज १ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने निर्मात्री दीपाश्री निरौलाको भनाई छ ।
उज्वल घिमिरेले निर्देशन गरेको यो फिल्ममा दयाहाङ राई, प्रियंका कार्की, सिताराम कट्टेल, केदार घिमिरे, दिपकराज गिरी मुख्य भूमिकामा छन् । कमेडी जनराको यो फिल्मको प्रदर्शन दसैंंको छेको पारेर गर्न लागिएको हो ।
दिपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माको मुख्य लगानी रहेको यो फिल्ममा सिताराम कट्टेल, केदार घिमिरे र जितु नेपालले पनि निर्माणमा सघाएका छन् । यो टिमले यसअघि 'छ एकान छ' बनाएको थियो ।
कुन फिल्म सफल होला
छबी ओझाको .... नीर शाह / डायमण्ड शम्शेरको ... बिकास आचार्यको
कि तीन वटै सफल होलान ??
सिक्वेल बिन्दास–३ को छांयाकन सुरु
बिन्दास र बिन्दास–२ ले राम्रै चर्चा पाएपछि राजु गिरीको निर्देशनमा सिक्वेल बिन्दास–३ को छांयाकन सुरु भएको छ । नेपालगन्ज, कर्णाली, महेन्दनन्द्र, चितवन, पोखरा, चरिकोट र काठमाण्डौंका विभिन्न स्थानहरुमा चलचित्रको छांयाकन गरिने निर्माण पक्षले जनाएको छ । रिचाद कुमार रसाइलीले निर्माण गरेका बिन्दास–३ चलचित्रमा अर्जुन पोखरेलको संगीत, नृत्य क्रान्ति केसी रहने भने मुकेश हुमागाईले खिचेका हुन् । चलचित्रमा शुभेच्छा थापा, अशोक फुयाल, मनिष कार्की, सुदन धिमाल, मिस्टर नेपाल सन्दिप सापकोटा, दिनेश शाहीलगायतले अभियान गर्ने निर्देशक राजु गिरीले जानकारी दिएका छन् ।Image title
युवा पुस्ताको प्रेमकथामा आधारित नेपाली कथानक चलचित्र बिन्दास–३ तिहारको अवसरमा रिजिल गर्ने तयारीको साथ छांयाकनको काम भइरहेको जनाइएको छ । यो चलचित्र ६५ लाखको लगानीमा निर्माण हुने निर्माता रिचाद कुमार रसाइलीले बताएका छन् । बिन्दास पोस्टरमा नायिका सुस्मा कार्कीले आफ्नो बक्षस्थल थिचेको र बिन्दास–२ मा चलचित्रको पोष्टरमा नवनायीकाको रूपमा चलचित्रमा देखिएकी अनिशा गुरूङलाई नङ्ग्याइएको थियो ।
करिश्मा र गोपिकृष्णको चुलियो जुहारी, ‘फागु’ जहाँ ‘होमवर्क’ त्यहाँ
चलचित्र ‘फागु’को घोषणा कार्यक्रममा गोपिकृष्ण मुभिजसँग सहकार्य गर्ने बताएपनि अन्तिममा साथ छोडेकी थिइन् निर्मात्री तथा नायिका करिश्मा मानन्धरले । करिश्माले साथ छाडेर एक्लै चलचित्र निर्माण गरेपछि उनको गोपिकृष्ण मुभिजसँग युद्ध सुरु भएको थियो । यो युद्ध चलचित्रको प्रदर्शनमा पनि देखिने भएको छ ।
करिश्माले भदौ २५ गतेलाई चलचित्र प्रदर्शनका लागि मिति तोकेकी थिइन् । तर, यो मिति तोकिएको केही दिनमै गोपिकृष्ण मुभिजले पनि आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘होमवर्क’को मिति तोेकेको छ । ‘होमवर्क’ पनि अब भदौ २५ गते नै प्रदर्शनमा आउने भएको छ ।
करिश्माको चलचित्रसँग गोपिकृष्ण मुभिजले चलचित्र जुधाएर युद्धलाई कायमै गरेको छ । करिश्माको ‘फागु’मा शिल्पा पोख्रेल मुख्य भूमिकामा छिन् । यता, गोपिकृष्ण मुभिजको ब्यानरमा निर्माण भएको ‘होमवर्क’मा आर्यन सिग्देल र नम्रता श्रेष्ठ मुख्य भूमिकामा छन् । आर्यन सिग्देललाई दोहोरो चरित्रमा देखाइएकाले पनि यो चलचित्रको चर्चा सुरुवातदेखि नै चुलिएको छ ।
चलचित्र ‘होमवर्क’लाई निर्देशक निरक पौडेलले कुनै संझौता नै नगरी निर्देशन गरेका छन् । यस्तै, चलचित्र ‘फागु’लाई संझना रौनियारले निर्देशन गरेकी हुन् । दुई चलचित्र एकसाथ जुध्नुमा गोपिकृष्णले करिश्मासँग खेल्न चाहेको जुहारी नै हो । गोपिकृष्णको साथ छाड्दा करिश्मालाई घाटा लाग्छ या फाइदा, भोली चलचित्र चलेपछि नै थाहा हुनेछ ।